चौधरी समूह : अन्तरराष्ट्रियस्तरमा व्यवसाय बढाउँदै | गृहपृष्ठ
Home कम्पनी प्रोफाइल चौधरी समूह : अन्तरराष्ट्रियस्तरमा व्यवसाय बढाउँदै
on: १८ असार २०७५, सोमबार १०:२० कम्पनी प्रोफाइल, बजार
चौधरी समूह : अन्तरराष्ट्रियस्तरमा व्यवसाय बढाउँदै
कुल १ सय ३६ कम्पनी रहेको चौधरी समूहको व्यवसाय विश्वका पाँच महादेशमा फैलिएको छ । समूहको मुख्यालय नेपालमा छ । समूहले विविधीकरण कायम राख्दै व्यवसाय विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । चाँडो विक्री हुने दैनिक आवश्यकताका वस्तु, विद्युतीय सामग्री, वित्त सेवा, व्यवसायलगायतमा संलग्न यो समूहले अझै लगानी बढाएर स्वदेश तथा विदेशमा फैलिएको व्यवसाय थप विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।
समूहको कुल लगानीमध्ये १५ प्रतिशत दैनिक आवश्यकताका खाद्यलगायत वस्तु, १५ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्र, १० प्रतिशत होटल तथा रिसोर्ट, १० प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक र ५० प्रतिशत अन्यत्र छ । समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीसहित उनका भाइहरू वसन्त चौधरी र अरुण चौधरीको स्वामित्व रहेको चौधरी साम्राज्यभित्र विनोदको नेतृत्वमा रहेका व्यावसायिक फर्महरूले मात्रै ५ हजारभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिएका छन् ।
विनोद चौधरी तथा उनको परिवारको नाममा १ अर्ब ३७ करोड अमेरिकी डलरबराबरको सम्पत्ति र सीजी कर्प ग्लोबलको साढे २ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सम्पत्ति छ । वसन्त र अरुण चौधरीको नेतृत्वका कम्पनीको सम्पत्ति छुट्टै छ । समूहअन्तर्गतका कम्पनीले वार्षिक अर्बाैं रुपैयाँकोे कारोबार गर्छन् । समूहका ७६ ब्राण्ड विश्वका ३० देशमा स्थापित छन् ।
चौधरी समूहको इतिहास
१९औं शताब्दीको अन्त्यतिर भुरामुल चौधरीले भारतबाट आयातित तयारी पोशाक बेच्न जुद्धसडक (न्यूरोड)मा पसल स्थापना गरेका थिए । पसलको भाडा वार्षिक रू. २ सय थियो । सोही व्यवसाय विकसित हुँदै हाल चौधरी साम्राज्यको रूपमा आएको हो ।
भुरामुल चौधरी, राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेर राणाको दरबारमा आवतजावत गर्थे । तत्कालीन समयमा दरबारमा भित्र–बाहिर गर्ने अनुमति थोरैलाई मात्र दिइन्थ्यो । चौधरी तिनै थोरै भाग्यमानीमध्ये एक थिए । यस अर्थमा चौधरीलाई राणा शासकको विश्वास पात्रका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्थ्यो ।
भुरामुल र उनका छोरा लुनकरणदास चौधरीले बेला–बेला जुद्धसडकको कपडा पसलबाट सरसामान भरियालाई बोकाएर दरबारभित्र लैजाने र राजपरिवारका सदस्य तथा अन्य आफन्तजनलाई बेचबिखन गर्थे । यस्तो व्यवसाय भुरामुल लुनकरणदास नामको अनौपचारिक निजी संस्थाबाट सञ्चालित थियो ।
पछि लुनकरणदासले विराटनगरबाट जुट निर्यातको काम थपे । उनी विराटनगरको जुट यूरोप/अमेरिकाका विभिन्न ठाउँमा लगेर बेच्थे । जुट बेचेर नेपाल फर्किंदा उनले जापान र कोरियाबाट तयारी पोशाक ल्याउँथे । जुन अरुण इम्पेक्स र भुरामुल लुनकरणदास नामका व्यावसायिक फर्मबाट विक्रीवितरण हुन्थ्यो ।
लुनकरणदासले जुट निर्यात र तयारी पोशाकको व्यवसायमा सफलता हासिल गरेपछि १९६०–७० को दशकमा देशभित्र थुप्रै उद्योग स्थापना गरेका थिए । फ्लोरिङ एण्ड फर्निसिङ सेण्टर, मोडर्न होजियारी इण्डष्ट्रिज, नेपाल स्पिनिङ एण्ड विभिङ इण्डष्ट्री, अरुण इम्पोरियम, अरुण इम्पेक्स एण्ड रत्न स्टेनलेश स्टील उनले स्थापना गरेका अग्रणी उद्योग हुन् ।
चौधरीले स्थापना गरेको फ्लोरिङ एण्ड फर्निसिङ सेण्टर नेपालमा घर सजावटका लागि चाहिने फर्निचरदेखि तकिया, तन्ना, पर्दा, कार्पेट, डोरम्याटलगायत सामग्रीको प्याकेज सुविधा दिने अग्रणी उद्योग हो । मोडर्न होजियारी इण्डष्ट्रिज नेपालको होजियारी (साना मेशिनको सहयोगमा उत्पादन हुने गञ्जी, मोजा जस्ता पहिरन) क्षेत्रको अग्रणी उद्योग हो भने जापानी प्रविधिबाट धागो उत्पादन गर्ने नेपाल स्पिनिङ एण्ड विभिङ इण्डष्ट्री नेपालमा ठूलो परिमाणमा सिन्थेटिक धागो उत्पादन गर्ने उद्योग हो । त्यसैगरी, रत्न स्टेनलेश स्टीलबाट स्टीलका घरायसी सरसामान उत्पादन हुन्छ ।
१९५७ सालमा स्थापना भएको युनाइटेड बिल्डर लुनकरणदासले स्थापना गरेको अर्काे महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक परियोजना हो । यसै परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौको पाँचतारे होटल ‘सोल्टी क्राउन प्लाजा’ र काठमाडौ–त्रिशूली सडक खण्ड निर्माण भएको हो । फोब्र्स पत्रिकाले वर्षेनि सार्वजनिक गर्ने विश्वका धनाढ्यहरूको सूचीमा पर्न सफल नेपालका एकमात्र व्यवसायी विनोद चौधरी लुनकरणदासका जेठा छोरा हुन् ।
अहिले विनोद चौधरी समूहका अध्यक्ष छन् । विनोदले भाइहरू वसन्त र अरुणको सहयोगमा पुस्तैनी व्यवसाय विश्वभर विस्तार गरेका छन् । चौधरी समूहअन्तर्गत तीन भाइ अरुण, वसन्त र विनोद आफ्ना अलग–अलग व्यवसायसमेत सञ्चालन गर्छन् ।
समूहले नेपालमा व्यावसायिक सफलता पाएपछि १९९० सालदेखि सिङ्गापुरको सिन्नोभेसन समूहसँगको साझेदारीमा अन्तरराष्ट्रिय कारोबार थालेको थियो । सिन्नोभेसन नेपालबाट अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्ने पहिलो र एकमात्र बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । समूहले सिन्नोभेसनमार्फत होटल तथा रिसोर्ट, वाइल्ड लाइफ र त्यससम्बन्धी पर्यटन, छिटो बिक्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु (एफएमसीजी), घरजग्गा, सिमेण्ट र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । सिन्नोभेसनले विश्वभरका ४८ कम्पनीमार्फत ४ हजार ३ सय कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छ ।
१९८५ सालदेखि नेपालमा वाइ–वाइ तयारी चाउचाउको उत्पादन शुरू भएको हो । समूहले चाउचाउ उत्पादन गर्न थाइल्याण्डको थाइ प्रिजभ्र्ड फूड फ्याक्ट्रीबाट प्लाण्ट झिकाएको थियो । तत्कालीन समयमा समूहले प्रविधियुक्त प्लाण्ट नेपाल ल्याउनकै लागि निकै ठूलो प्रयास गर्नुपरेको थियो । वाइ–वाइ अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो तयारी चाउचाउ उत्पादक हो । यसले नेपाल, भारत र अन्य केही देशमा राम्रो लोकप्रियता कमाएको छ । वाइ–वाइ नेपालको सबैभन्दा राम्रो तयारी चाउचाउ ब्राण्डको रूपमा स्थापित भएको छ । समूहले भारतमा छिटो विक्री हुने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु बजारको २७ प्रतिशत हिस्सा वाइ–वाइको रहेको दाबी गरेको छ ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि समूह यूरोप र अमेरिकामा वाइ–वाइको आपूर्ति बढाउन केन्द्रित छ । यसका लागि उसले यूरोपमा प्लाण्ट स्थापना गरेरै वाइ–वाइ उत्पादन गरिरहेको बताएको छ । समूह तयारी चाउचाउको विश्वबजार कब्जा गर्ने योजनामा छ । समूहले उक्त ब्राण्डमा विभिन्न फ्लेभरको चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको छ ।
सीजी होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स र ताज होटल्स रिसोर्ट्स एण्ड प्यालेस
जेडब्ल्यू होटल्स र सीजी होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स
ताज सफारी र सीजी होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स
समिट होटल र सीजी होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स
सञ्चालनमा रहेका व्यवसायमा आगामी ३ वर्षभित्र रू. ५० अर्ब लगानी थप्ने
ऊर्जा, सेवा व्यापार र घरजग्गासम्बन्धी कारोबारमा लगानी बढाउने
६० मेगावाटको ऊर्जा परियोजनामा रू. १७ अर्ब लगानी थप्ने
१५ मेगावाटको मध्यमादीमा रू. ३ अर्ब र ४४ मेगावाटको सुपरमादीमा रू. ७ अर्ब ५० करोड लगानी थप्ने
रियल इस्टेटमा रू. १० अर्ब लगानी गर्ने
समिट होटलमा १ सय २० कोठा थप्न रू. २ अर्ब लगानी थप्ने
निर्माणाधीन होटल जिङ्कसिटी सम्पन्न गर्न डेढ अर्ब लगानी थप्ने
नवलपरासीमा रू. ५० करोडमा १८ ओटा फार्म हाउससहितको पञ्चकर्म फिटनेश सेण्टर निर्माण गर्ने
पाल्पा र दुम्किबासको सिमेण्ट प्लाण्टका लागि रू. ९ अर्ब ४० करोड लगानी थप्ने
सीजी ब्रुअरीमा रू. १ अर्ब लगानी थप्ने
नवलपरासी र सुनसरीको वाइ–वाइ प्लाण्टमा रू. ८० करोड लगानी थप्ने
नवलपरासीको रियो जूस फ्याक्ट्रीमा रू. २५ करोड लगानी थप्ने
सीजी प्याकेजिङका लागि रू. २० करोड लगानी थप्ने
Dear sir I have 27 years experience about dairy factory.bevrage and chocolate so can u help me open factory one in your area so I can used my exeperince in it company sir.thank you by.
LeaveaReply to Ganesh shahi Cancel Reply